Hay?ada Yes oo aqoon iswaydaarsi socday 3 maalmood kusoo gabagabaysay magaalada Garowe. – Radio Daljir
Maajo 4, 2013 2:56 b 0
Garowe, May, 04, 2013 ? Waxaa maantay magaalada Garowe lagu soo gabagabeeyay aqoon iswaydaarsi socday muddo 3 cisho ah, kaasi oo looga hadlayay sidii iskuullada Puntland loogu sameyn-lahaa kooxo ka shaqeeya nabadda iyo isdhex-galka bulshada.
Aqoon iswaydaarsigaan waxaa soo xaadiray dad kor u dhaafaya 40 qof, kuwaasoo isugu jira macaliin, arday, iyo aqoonyahano ka kala yimid gobollada Mudug, Nugaal, iyo Bari, kuwasoo mudadii 3-da cisho ahayd si aad ah uga dooday nidaamka ugu haboon oo loo samayn-karo kooxo ka shaqeeya nabadda.
Obokar Siciid Jaamac oo ah madaxa tababarada hay?ada YES Soomaaliya oo u waramay Radio Daljir ayaa sheegay in laga filanayo tababarkaan himilooyinka la hiigsanayo ee mashruuca, kaasi oo ku aadan kor u qaadida hannaanka nabadda Soomaaliya iyo sidii arrintaasi la isaga kaashan lahaa.
Aqoon iswaydaarsigaan ayaa waxaa maal-galisay hay?adda? hay?adda Diakonia, waxaana waxaana soo qaban-qaabisay hay?adda YES Somaaliya, iyadoo la filaayo in tababaro kale oo lagu hormarinayo geeddi-socodka nabadda lagu qaban-doono magaalooyinka Puntland.